Creative Writing » ရန်ဖြစ်ခြင်းအနုပညာ	39
စာပေအနုပညာ ၊ ပန်းချီအနုပညာ ၊ ရုပ်ရှင် အနုပညာ စသည်ဖြင့် အနုပညာများစွာ ရှိနေ အထဲ ရန်ဖြစ်ခြင်း အနုပညာ ကို လည်း ထည့်သွင်းခံစား ကြည့် မိပါတယ် ။ စကားများရန်ဖြစ် ခြင်းကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ဆိုးကျိုး တွေရှိသလို တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အသိဉာဏ်တွေ တိုးတက်ရရှိ လာနိုင်တယ် လို့ ပြောရင် လက်ခံမယ့်သူရှိပါ့မလားး? အသေးအမွှားကိစ္စတွေနဲ့ စကားများရန်ဖြစ် ပြီး ရိုက်ကြ ကွဲကြ နဲ့ လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်တာ ကိုတော့ လက်မခံလို့ မရဘူးပေါ့ ။ အဲ့လိုဖြစ်တာကိုတော့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်း တဲ့အနုပညာ အဖြစ် သရုပ်ပျက် သွားမှာတော့သေချာပါတယ် ။ အနုပညာဆိုတာ လူတစ်ယောက် မှာရှိတဲ့ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းတဲ့စိတ် ဓာတ်တွေကို နူးညံ့ပျောင်းလာအောင် လူ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုသာယာစိုပြေ လာအောင် ဖန်တီးပေး တာလို့ လက်ခံထား ပါတယ် ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ရန်မဖြစ်ဖူးတဲ့သူ မရှိလောက်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။ သားသမီး နဲ့ မိဘ ချင်း ဖြစ်စေ ၊ ချစ်သူချင်း ၊မောင်နှမ ချင်း ၊ သူငယ်ချင်း အချင်း အကြောင်း အမျိုး ကို စကားနိုင် လု ရင်း နဲ့ ရန်ဖြစ် တယ် ။ ကိုယ် ထင် ရာကို ကိုယ့်စိတ်ထဲက အတိုင်း လိုရာ ဆွဲယူ ပြော ရင်း ရန်ဖြစ် ကြတယ် ။ ရန်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို တခြားတစ်ယောက် ကိုပြောပြတာ လက်မခံ လို့ ဖြစ် တာ ရှိတယ် ။ ကိုယ်လို ချင်တာ တောင်း လို့ မရ ရင် ရန်ဖြစ်တယ် ။
ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ တခြားသူ ကို နေစေချင် တယ် အဲ့ဒါ ကိုညှိနှိုင်း လို့ မရတော့ ရန်ဖြစ်ပြန် ရော ။ လူတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှာ ပြီး ရန်ဖြစ် နေတတ် ကြတယ် ။ မုန်းနေတဲ့သူ နှစ်ယောက် ဆိုရင် တခါ လောက်ကို အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ် ကြမယ် ပြီးရင် လေပေါ်လေ အောက် အသံတောင် မကြားချင် မမြင်ချင် လောက်အောင် ဒါမှမဟုတ် မမြင်နိုင် တဲ့နေရာ မှာ သွားနေ လိုက်ကြတယ် ။ မုန်းတဲ့သူချင်းဆို တခါပဲ ရန်ဖြစ် တတ် ကြ ပေမယ့် ချစ်တဲ့ သူ အချင်းချင်းဆို ခဏ ခဏ ရန်ဖြစ်မယ် ပြီးရင် သံယောဇဉ် တွေကအငြိမ်နေ တာမဟုတ် ပဲ အမြင်မတော် တော့ ပြောမိပြန်တယ် ။ စေတနာ တွေပို ပြီး သူ့ အကြိုက် ကိုယ့် အကြိုက် လုပ်ပေးမိတော့လည်း စိတ်ချင်းက မတူ နိုင်တော့ ရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ရော ။ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ် လိုက်နဲ့ နေ့ ရက် တွေက မရိုးနိုင်အောင် စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းနေ တတ်တယ် ။ လူ တွေကတကယ် အတ္တကြီးလွန်း ပါတယ် ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တွေပြောတယ် ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ဆို ဘယ်သူ့ ကိုမှ
8.4.2015 About Sine Sant
Mike says: နူးညံ့ပျော့ပြောင်း တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ နဲ့ စကားများရန်ဖြစ် မယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံး အကျိုးရှိနိုင်မယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ် .ဆိုတော့ အဲ့တာ ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့…ငြင်းခုံတာဖြစ်သွားပီ
. နူးညံ့ပျော့ပြောင်း တဲ့စိတ်ဆိုတာနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့မှမရတာ…ဒေါသလေးပါမှပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ စိတ် ကိုဆိုလိုချင်တာက ငါ့စကားနွားရ
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှတွေး စေချင် တဲ့စိတ်ကို ပြောတာပါ ကျေးကျေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်က တနင်္ဂနွေသား စိတ်တိုတတ် ဒေါသကြီးတတ်လို့ ရန်မဖြစ်အောင်နေတယ်
္ဌတော်ရုံလည်း ခံမငြင်းဘူးးးးးး လို့ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: တနင်္ဂနွေ သားတွေ စိတ်အရမ်း ကောက်တတ် တာတော့
ယုံတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: brainstorming ဆိုပီး ကျီးကျီးကျယ်ကျယ် လုပ်ရင်းလည်း ရန်ထဖြစ်တတ်ကြတာပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ဟုတ်တယ် ဘာမဟုတ်တဲ့ ဟင်းဖက်လုရင်း ထမင်းဝိုင်းမှာတောင်
ခင်ဇော် says: Credit to Thein Myint Win
ဒီလိုအသည်းအသန်တွေ ငြင်းခုန်လို့ အရှိန်တက်လာတဲ့အခါ အနိုင်ရပြီးရော အောက်လုံးတွေ လုပ်ချင်လာရင် ဘေးက ဝိုင်းထိမ်းကြသေးတယ်။ တစ်ခါတလေတော့ ဒေါနဲ့မောနဲ့ကိုး။ အောက်လုံးဆိုတာ အကြောင်းအရာကို ပယ်ပြီး ကိုယ့်ငြင်းဖက်ကို ယုံလောက်စရာ လူမဟုတ်ကြောင်း ဖိဆော်တာမျိုးကို ပြောတာ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ အဲဒီအရွယ်ထဲက မင်းက စောက်ပေါ ပါကွာ ဆိုတဲ့ အကွက်မျိုးကို ရှောင်သင့်မှန်း သိတယ်ဗျ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်လို့ နိုင်လည်း အကြောင်းအရာက နိုင်ဦးမှကိုး။ အခုအချိန် လူကြီးတွေ ငြင်းရင်းခုန်ရင်း အဲဒီကောင် စောက်ပေါပါကွာ အကွက်ချိုးရင် သိပ်ရယ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုးတန်းအဆင့်တောင် မမီဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ ငြင်းဖော်ငြင်းဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သတိရတယ်။ ဒီလူတွေနဲ့ ငြင်းခဲ့ရတာလည်း သိပ် ဂုဏ်ယူတယ်။ ငြင်းတဲ့နေရာမှာ တစ်ကောင်မှ စောက်ပေါမပါဘူး။
lu lu says: အရင်တုန်းကတော့ငြင်းခုန်နေတတ်တယ်
naywoon ni says: ကိုယ်​က တစ်​စုံတစ်​ခုကို ယုံကြည်​စွာဆုပ်​ကိုင်ထားမိပြီဆိုရင်​ အဲ့ဒိအ​ကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ လာမငြင်းနဲ့​တော့ စမ်းစမ်းတင့်​ပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
lu lu says: ဟုတ်မှာပါ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပီတယ်ဟေ့ အလက်ဇင်း။ အဲအကြောင်း ပြောချင်နေတာကြာပါပြီ။ တကယ်တော့လည်း စကားလုံးတွေနဲ့ပဲ ရှုပ်နေကြတာ။ ရန်ဖြစ်တာတွေ ငြင်းခုန်တာတွေဟာ လောကမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်။ လူသားရဲ့ အသိဥာဏ် တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်အတွက် အရေးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ဖြစ်ခြင်း ဘ၀သစ္စာ။ ဒါမှမဟုတ် ငြင်းခုန်ခြင်း ဘ၀သစ္စာ အဲလိုမျိုးလေးတွေ သုံးရင်ကောင်းမှာ။ ဘာလို့ဆို အနုပညာကို ထိပ်တန်းထားတတ်တဲ့လူအတွက် ရန်ဖြစ်ခြင်း အနုပညာ ဆိုရင် အင်း … ကိုယ်အောက်သွားတာပေါ့နော်။
lu lu says: အစ်မ ပြောပြမှပဲ အနုပညာအကြောင်း နောက်ထပ်တခါ ထပ်သိ
နိုင် ရင် ဒါအနုပညာ မြောက်တယ် လို့ ယူဆမိပါတယ် အခုလို အစ်မ နဲ့ ပြောဆို ဆွေးနွေး ရလို့ ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်
Courage says: ကျွန်တေ်ာကတော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု သန္တန်ကို အခြေပြုကာ ပေါက်ဖွားလာသော အရာမှန်သမျှကို အနုပညာလို့ခံယူပါတယ်။ ပြောရရင် ဟင်းချက်ခြင်းကအစ စစ်တိုက်ခြင်းအဆုံး အားလုံးဟာ အနုပညာ အဖြစ်ခံယူထားသပေါ့။ ဘာလို့ဆို အနုပညာဆိုတာ သိမ်မွေ့သော ပညာတစ်ရပ်လို့ ဆိုလေတယ် မဟုတ်ပေသလား။
lu lu says: လုလုနဲ့ အယူအဆ ချင်းတူသွားပြီ Courage ရော
ထားလို့ ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Alinn Z says: Courage says: လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု သန္တန်ကို အခြေပြုကာ ပေါက်ဖွားလာသော အရာမှန်သမျှကို အနုပညာ…. လို့ ခံယူ…
ဆရာ ဒဂုန်တာရာတို့… လက်စွဲတော် ဓါးအဖြစ် ရွှမ်းခနဲ ထုတ်ပြခဲ့ဖူးသဗျ။ ထားပါတော့… သူတို့ အယူအဆနဲ့သူတို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ…. ရှိစေတော့… အဲဒီ အယူအဆကို ကျနော်ကတော့ သဘောမတူတော့ပါဘူး။
လက်ရှိ ပိုစ့်မော်ဒန်ခေတ်မှာ ကျိုးပျက်သွားပါပြီ။ အခုလက်ရှိ ပိုစ့်မော်ဒန်ခေတ်မှာ….
သတ်မှတ်ချက်တွေ…စည်း / မျဉ်း / ဘောင် / ခွင် တွေ….တဝုန်းဝုန်းလဲပြိုသွားပါပြီ။ အကြောင်းအချက်တွေ ကိုင်ပြပြီး… ဒါတွေ ဒါတွေ ဟာ..အနုပညာပဲ…
အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပိုင်းစပြိုကွဲနေတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီလို ပိုင်းစ စိတ်မွှာသွားတဲ့ (သို့မဟုတ်) ဖြာထွက်သွားတဲ့ အနုပညာချင်းရာတွေကို
ယနေ့ခေတ် အနုပညာက …ပိုစ့်မော်ဒန် လူငယ်တွေကို ဖမ်းစားပစ်လိုက်ပါပြီ။ (ကျနော်ပြောတဲ့ အနုပညာဆိုတာ စာပေအနုပညာကို အဓိကဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။)
အစ်မတော် ပြုံး… အနုပညာ အယူအဆပိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ
အစ်မတော်နဲ့ ကျနော် တူညီမျှခဲ့တယ်ဆိုပါတော့… အစ်မတော် ပြောခဲ့တဲ့ထဲက…
.ဘောင် အကျဉ်း/ အကျယ်..စတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်း..မဆိုင် ရေးချ မဆိုင်… .လောလောဆယ်တော့ ခရီးမသွားခင်လေး.. အချိန်ရသလောက် ဝင် ပွါးတာ…
ပိုစ့်တစ်ပုဒ် ခွဲထွက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့… ဒီပိုစ့်ကို သိမ်းထားလိုက်ပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: စာပေအနုပညာ (ခံစားမှုအနုပညာ)နဲ့ နေထိုင်ခြင်းအနုပညာ (art of life) ရဲ့ ကွာခြားချက်လို့ ပဲထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာကိုက သိမ်မွေ့သော အနုပညာ၊ ဖမ်းစားခြင်းဆိုတာကိုက သိမ်မွေ့သော အနုပညာပါ။ ခံစားမှုနဲ့ အနုပညာဆိုတာ ခွဲခြားကြည့်ဖို့တော့ အတော်ခက်ခဲမှာပေါ့
Kaung Kin Pyar says: ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ တခါတလေတော့ လိုအပ်ပါတယ်…။ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ သူ့အမြင်မတူလို့ ငြင်းခုန်တာ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို တဖက်လူသိအောင် ထုတ်ဖော်တာ..။
lu lu says: ရှိတ်လိုက် တော့ ကောင်းကင်ပြာ
twitty says: ရန်ဖြစ်ခြင်းကို အနုပညာလို့တော့ ခံစား၍မရပါ။ ငြင်းခုံခြင်းအနုပညာ ဆိုရင်တော့ တင်စားချက်အနေနဲ့ လက်ခံပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ငြင်းခုံခြင်းကို အတတ်ပညာလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ငြင်းခုံခြင်းအတတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူများ လက်ရည်ညီညီနဲ့ ငြင်းခုံကြမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီငြင်းခုံပွဲတွေဟာ အနုပညာတရပ်လို လှပသွားတတ်ပါတယ်။
ဒေါသသင့်နေတဲ့ အနုပညာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Alinn Z says: .ဒေါသသင့်တဲ့ အနုပညာက
kai says: ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့..ဒေါသက.. ကဗျာစပ်ရင်သင့်တဲ့ဒေါသမျိုးပါကိုရင်ရယ်..။
ရန်ဖြစ်ဆိုတဲ့.. အဓိပ္ပါယ်ကြမ်း… စာလုံးကြမ်းကြီးကို.. အနုပညာဆိုတဲ့စာလုံးလှတဲ့တွဲလို့… သင့်တဲ့.. ဒေါသပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: လာဗြန်​ဘီ ​ဒေါသဂိုဏ်းသင့်​တဲ့အ​ကြောင်း
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အနုပညာအ​ကြောင်း​တော့မ​ဆွေး​နွေးလိုဘူးရယ်​
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အလင်းဆက် says: အနုပညာရဲ့ သဘောသဘာဝမှာကိုက… ဘယ်အရာနဲ့မှ ရောနှောသတ်မှတ်မှု မရှိတဲ့ သီးသန့် တန်ဖိုးတည်ရှိလာပြီးသား…
မြစပဲရိုး says: “ရန်ဖြစ်ခြင်း အနုပညာ” မှာ ငြင်း နေတာ အားရ စရာဘဲ။
lu lu says: တခါတလေ ငြင်းခုန်နေရတာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်
uncle gyi says: ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဒေါသနဲ့အတ္တမပါပဲရန်ဖြစ်ဖို့သိပ်မရှိ
lu lu says: ပြောရမယ်ဆိုရင် ခုတလော
. . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ကောင်လေးတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်လို့.. တန်းပြောလည်း..ရပါတယ်ကွယ်..။
ကဲ.. ကောင်လေးတွေ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: တိန်! !
ဦးကြောင်ကြီး says: ၄မဂလု တွေးဆပြု ဖေးမခရု ဝေးစွရှု..
padonmar says: ကြောက်တတ်တယ်။ ရန်မဖြစ်ရဲဘူး။
kai says: တောင်းပန်ကျေအေး… ဆိုတာကို… ဖွင့်ပြတဲ့… ဗီဒီယိုလေးပါ..။
Mr. MarGa says: ရန်ဖြစ်​တတ်​တယ် (ပါးစပ်​နဲ့ စာသားနဲ့)
ရန်ဖြစ်ကြရ​အောင်လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: martial arts ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပညာ (kickboxing၊ ဂျူဒို၊ ကရာတေး စသဖြင့်) ကို လက်တင် စကားယူပြီး တင်စားခေါ်တာပြောတာဘဲ။
Thint Aye Yeik says: ဗျို့ သူကြီး